トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka ny mindrana vola any amin'ny banky
Izy io dia banky mafy ahiahy amin'ny teny izay hisambotra ny vola, fa satria misy isan-karazany ny planina sy ny fampindramam-bola, izay mety ho olona sasany fa ny fanapahan-kevitra, na tsy hanaraka tsara.
Ankoatra izany, ny soa ny nindram-bola any amin'ny banky dia zava-dehibe mazava ho azy hahatakatra ihany koa ny fatiantoka.
any amin'ny banky, toy ny mendrika
banky sy ny fitantanam-bola mpanjifa ny nindram-bola, ao fa misy isan-karazany lenders, dia ny nindram-bola avy amin'ny banky dia ahitana tombontsoa toy ireto manaraka ireto.
dia ambany zanabola, arakaraka ny fomba fampiasana
karatra banky fampindramam-bola, raha oharina amin'ny zanabola ny mpanjifa Fitantanam-bola efa napetraka ambany.
Indrindra indrindra, ny tanjona multi-bola, antsoina hoe findramam-bola maimaim-poana, koa misy ny banky azo nohofana amin'ny tena ambany dia ambany zanabola tokony ho 4%.
Noho izany, na dia kely nindrana, dia mila tsy enta-mavesatra tamin'ny fotoana hamaly.
Raha ny fampiharana ny nindrana koa tranga malamalama ny
Internet-monina banky, Raha misy olona Izay manan-tantara mialoha, dia handray soa koa ny teboka fampiharana no malama.
adiresy na ny anarana, fa toy ny toeram-taona sy ny asa Efa voasoratra ara-panjakana, rehefa ho tanteraka raha toa ka afa-po, toy ny toe-javatra nindrana. Satria izay mamela ny fampiharana avy
smartphone, koa azo antoka amin'ny olona tsy manana fotoana na ny toy ny asa na ny raharahany.
Ankoatra izany, ny banky no tany am-boalohany karama famindrana ny kaonty, dia matetika no mahazo vaovao bola ny famerenana ambony noho ny hafa ara-bola andrim-panjakana.
vokatr'izany, satria afaka mitarika ny sasany mba hampitomboana ao amin'ny zanabola ambany dia ambany sy ny ambony indrindra habetsaky ny vola, amin'ny vidiny, raha Voalohany indrindra ny banky lehibe hieritreritra momba ny caching, satria ny soso-kevitra.
mampivondrona vola koa ny fiadanan-tsaina rehefa mila < / I2>
ny raharaha ny mpanjifa bola, na dia ny fandinihana ny mindrana somary tsy mifatotra, ny fetra voalohany amin'ny ankapobeny mikasika ny 500.000 hatramin'ny 100.000.
Na izany aza, rehefa manao fampindramam-bola any amin'ny banky, dia tsy mahazatra ihany koa ny fetra efa napetraka ho avo toy ny 10 tapitrisa yen avy 5 tapitrisa yen.
Na izany aza, dia izao no tantara iray fa ny findramam-bola ny fiara sy ny tena toetrany no tena. Rehefa manao fampindramam-bola amin'ny anaran'ny
velona toy izany ny fandaniana, ka ny iray ampahatelon'ny ny fidiram-bola, ary noho izany dia tapa-kevitra araka ny lal?na, ary na firy na firy dia tsy azo tanterahana ihany mindrana ity fetra ambony.
ny famintinana fampiharana Azo inoana ny findramam-bola
kokoa dia fehezina nindrana "trosa fanamafisana" ihany koa, azonao ampiasaina eo amin'ny mindrana avy amin'ny banky.
ity ihany koa fanompoana momba ny banky bola ambony indrindra tsy manam-paharoa fa ny vola no nametraka ny hampitombo. Koa satria azo atao ny hanafoanana ny
zanabola sy ny liana be, ianao ho azo antoka na dia ny olona izay azom-pahoriana amin'ny hamaly.
koa mandany fotoana fatiantoka alohan'ny mindrana
Raha hisambotra vola
banky, ny fangatahana azo atao avy toy ny Internet, na varavarankely.
Na izany aza, ny mahamety amin 'ny fizahana natao vokatry dia angamba rehefa afaka andro vitsivitsy avy amin'ny andro manaraka. Raha hisambotra ny habetsahan'ny vola
indrindra fa miara hoe, ao amin'ny minitra fanadinana Andeha nanamarika fa mitaky fotoana.
mpanjifa fitantanam-bola ary koa tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia mety efa nanao fanompoana miorina amin'ny hafainganam-pandeha fanadinana in Uri. Na dia toy izany vola
ambony indrindra ary ny voalohan'ny nindrana dia napetraka ho ambany, dia mila vola avy hatrany, dia ho vaovao tsara ho an'ny olona izay.
Ankoatra izany, satria ny zanabola koa ny feon'ny fieritreretany toerana malalaka, azafady miezaka hahita ny banky ny tranonkala, raha mbola manahy.
Indrindra indrindra, raha ny karatra findramam-bola amin'ny banky Internet-monina, misy koa toerana iray antsoina hoe azo atao mandra-pahatongan'ny andro izany andro izany famerenana sy ny fampindramam-bola.
Na dia izany aza, satria tsy misy varavarankely mba hanafaka ny tahirin-kevitra takiana, tsara ny hevitra ao amin'ny izay ny endriky ny daty mailaka tat? aoriana. Amin'ny toe-javatra sasany
, ny antontan-taratasy dia tsy azo notanterahina nindrana ho tonga, satria ny raharaha antsoina koa hoe mba hahazoana antoka sonia avy any amin'ny lavaka fantsakana nianatra.
karatra banky bola no ambony indrindra ny tombontsoa mety hampihena ny zanabola.
toy ny rehefa te-hampihatra ny trosa sy ny fanamafisana ny tena toetrany rehefa sy avo toy ny fiara miantsena, mba hampihenana hampihenana ny fandoavam-bola farany no ho voalohany kandid?.
Ankoatra izany, ny banky dia toerana iray manam-pahaizana manokana mikasika ny fomba miasa ny vola miasa. Na dia afaka hamaly raha mbola
foana ny fiainana, raha Tatere hamaly izay karazana drafitra, ary dia mora ny mijery zanabola, anisan'izany ny zavatra toy ny tena fa ho toy ny mpitari-dalana, ireo izay miahiahy momba ny nindrana, aloha mitady fomba hiresahana amin'ny banky ihany koa ny hevitra tsara.